२३औँ जन्मदिन मनाउँदै बर्षा, यसपालीको सरप्राईज प्रेमीको हातमा छ - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२८ मंसिर,२०७३ | Forseenetwork
नायिका बर्षा राउत आज आफ्नो २३ औँ जन्मदिन मनाउँदैछिन् । २०५० साल मंसिर २८ गते काठमाण्डौको थापाथलीमा जन्मेकी बर्षाले सिनेमामा विकास आचार्य ब्यानरको नाई नभन्नु ल ४ बाट ब्रेक लिएकी थिईन् । पहिलो सिनेमामा नै सफल र नाम चलेको ब्यानरमा काम गर्ने अवसर पाएकी बर्षाले त्यसपछि सिनेमा छक्का पञ्जा र जात्रामा काम गरिन्, जुन सुपरहिट रहे ।
सिनेमामा काम गरेर फ्यान र म्युजिक भिडियोमा काम गरेर दाम कमाईन्छ भन्ने उनी काम गर्दा निकै रमाउँछिन् । यहि कारण पनि उनी पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताको मन पर्ने अभिनेत्री बनेकी छिन् । वर्षाले म्युजिक भिडियोमा केही वर्ष काम गरेपछि सिनेमामा आउने मौका पाएकी थिईन् ।
२२ औँ जन्मदिन बिर्सनैँ नसक्ने भएको थियो
आज २३ औँ जन्म दिन मनाउँदै गरेकी बर्षा सामान्य तरिकाले जन्मदिन मनाउन मन पराउँछिन् । हामीले उनलाई २३ बसन्त पार गर्दा आज सम्म मनाएका जन्मदिनहरुमध्ये कुन चाहि स्पेशल रह्यो ? कुनै जन्मदिन छ त्यस्तो विशेष ? भनेर सोध्दा उनले भनिन्, छनि किन नहुनु ? पोहोर साल जन्मदिनको अवसरमा पाएको सरप्राईज म कहिल्यै पनि बिर्सन्न । जुन मलाई मेरो प्रेमी संजोगले दिनु भएको थियो । मैलै सामान्य तरिकाले मनाउने भनेर दुई चार जना साथीहरुलाई मात्र बोलाएको थिएँ । तर उहाँले मेरा सम्पूर्ण साथीहरुलाई बोलाएर मलाई सरप्राईजसँगै खुसी दिनु भयो । त्यो मेरो लागि विशेष थियो ।
पाँच बर्ष देखिको साथीले सबैभन्दा पहिले शुभकामना दिनुभयो
त्यस्तै २३ औँ जन्मदिनमा उनलाई सबैभन्दा पहिले कसले शुभकामना दियो भनेर हामीले सोध्दा उनले भनिन्, “मेरो पाँच बर्ष देखिको साथी विजेन्द्र वास्तोलालो सबैभन्दा पहिले शुभकामना दिनु भयो । मलाई एकदमै खुसी लाग्यो ।”
यसपालीको सरप्राईज प्रेमीको हातमा छ
गत बर्षको जन्मदिनमा सरप्राईज दिएका प्रेमीले यो बर्ष दिने नदिने उनकै हातमा भएको बर्षाले बताईन् । बर्षाको जन्मदिनको लागि संजोगको सरप्राईज प्लान के छ भन्ने थाहा नभएपनि संजोगले उनलाई बिहानै म्यासेज मार्फत जन्मदिनको शुभकामना भने दिएका छन् ।
तर जन्मदिनको सरप्राईज पार्टी कसले पो थाहा दिन्छ र । सायद यसपाली पनि संजोग बर्षालाई सरप्राईज दिने सोचमा छन् कि ?
संजोग र बर्षा एकअर्काको प्रेममा रहेको पाँच बर्ष भईसकेको छ । पाँच बर्ष अघि एक फिल्म अडिशनको क्रममा उनीहरुको भेट भएको थियो । जन्मदिनको अवसरमा वर्षालाई हाम्रो तर्फबाट लाखौँ लाखको शुभकामना ।